I-china abakhiqizi bokubiya ngocingo oluphindiwe nabaphakeli | I-Shoufan Metal
Ucingo lwentambo ephindwe kabili lusebenzisa ikhwalithi ephezulu yekhabhoni insimbi engagqwali njengezinto ezingavuthiwe. It is ashiselwe ngocingo olulodwa mpo futhi izintambo ezimbili enezingqimba; lokhu kungaba namandla ngokwanele, uma kuqhathaniswa nephaneli evamile ebiyelwe yothango. Ububanzi bezintambo buyatholakala, njenge-6mm × 2 + 5mm × 1, 8mm × 2 + 6mm × 1.
Ucingo lwe-Double Wire
Ucingo lwentambo ephindwe kabili lusebenzisa ikhwalithi ephezulu yekhabhoni insimbi engagqwali njengezinto ezingavuthiwe. It is ashiselwe ngocingo olulodwa mpo futhi izintambo ezimbili enezingqimba; lokhu kungaba namandla ngokwanele, uma kuqhathaniswa nephaneli evamile yothango oluhlanganisiwe. Ububanzi bezintambo buyatholakala, njenge-6mm × 2 + 5mm × 1, 8mm × 2 + 6mm × 1. Ithola amandla aphakeme kakhulu ukumelana nokwakhiwa.
Okuthunyelwe:Lolu hlelo luvame ukukhetha i-Square Post (50 × 50mm, 60 × 60mm), i-Rectangular Post (80 × 60 × 2. 5mm, 120 × 60 × 3mm) neposi lepentshisi ngamandla amakhulu njalonjalo. Ngamakepisi epulasitiki noma isigqoko semvula sophahla. Ubuso obuqediwe ngokuvamile buhlanganiswe ngophahla lwensimbi no-Powder, noma kungenjalo.
Okuthunyelwe:Peach Post; Okuthunyelwe Okuyisikwele; Unxande Okuthunyelwe
Ukubopha:Amaphaneli nokuthunyelwe kuhlanganiswe kanye namabhawodi noma ama-rivets, kusetshenziswa ibha yensimbi eyisicaba noma izibopho zensimbi ezikhethekile, wonke amantongomane ayazikhiya. Lokhu futhi kungakhiwa njengezicelo zamakhasimende akhethekile.
Qeda ukwelashwa:I-lashukumisa / i-Polyester eboshwe eluhlaza, eminye imibala ejwayelekile iyatholakala ngesicelo. Ingamelana ngokuqinile nemisebe ebhubhisayo neye-ultraviolet, futhi ingagcina umbala wokuqala nesikhathi eside usebenzisa.
Ilungiswa endaweni esezintabeni, egqumeni nasezintabeni. Ucingo lwentambo ephindwe kabili njengoba ucingo lobuchwepheshe lusetshenziswa ezikhumulweni zezindiza nasezikhungweni zamasosha. Ngenkathi ungeza indololwane, insingo yocingo, ucingo oluhlabayo nezinye izesekeli zokuphepha, ingavikela amasayithi wokuthuthukisa ngokwengeziwe.
Intengo ebiyelwe ngocingo kabili ingaphansi kwezinga eliphakathi nendawo, isetshenziswa kakhulu ezindaweni zezimboni, ezinkundleni zokudlala, kwezikaqedisizungu, ezikoleni nasezinkulisa njengocingo lwezokuphepha.
Imininingwane ye-Double Wire Fence:
× Ububanzi Iphaneli
Langaphambilini Uhlaka olubiyelwe ngocingo
Olandelayo: 358 Ucingo lokubiyela